Tan Skin Love SE Dolls 167CM/5ft5 Real Sex unodoli Maria
Ikomityi yesini yoonodoli,Oonodoli besini abancinci
UMaria 167CM/5ft5 E-Cup SE Tan Skin TPE Unodoli weSini
Ibhanti: I-SE Doll
Thenga le doll yesini, Uya kufumana esinye sezi zipho zilandelayo:
* Mahala-Ukuphulula amalungu esini ngokwenyama
* Simahla - Iimpahla ezongezelelweyo
* Simahla - Isisamba
Umbala wolusu: *
Umbala wamehlo: *
Indlela yokwenza iinwele: *
Ubufazi obakhelwe ngaphakathi bufakwe ngokusisigxina kudoli. Faka ilungu lobufazi kubandakanya umkhono ohanjiswayo ukulungiselela ukucoca. Akukho mahluko kwinkangeleko.
Uhlobo lwamahlombe: *
Bhetyebhetye: Shrug, Fixed.
Inwele zokukhula : *
Umbala womnwe: *
I-French manicure ehamba ze
I-Pink French Manicure
Uzwane Umbala: *
Ukukhetha iinyawo: *
Ukuma kweenyawo ezinokukhetha kuvumela unodoli ukuba azimele. Iintloko ezintathu ze-bolt zandiswa ukusuka ezantsi kunyawo ukunceda ukuzinza.
Phawula Iingcebiso ezongezelelweyo
❤ Ingubo x1 | Iziqhano x1 | IiWigs x1 | Ukudibanisa x1
❤ Iimpahla zonodoli x1 | Isixhobo sokucoca x1 | Intonga yokufudumeza x1
Ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala!
❤Ixesha lokuzisa: malunga neeveki ezi-1-2. | UkuPakisha okuyimfihlo
❤Iidoli zesondo kunye neCovid-19: Umngcipheko weZero wokuThunyelwa
Unonophelo kunye noLondolozo
Imbali yemvelaphi kaMaria:
UMaria unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-167cm / 5ft5. Isithukuthezi kunye nokudandatheka zizinto ezisongela inxalenye enkulu yabemi, nto leyo eyenza ukuba sichaphazeleke kuluhlu lweengxaki zempilo zexesha elide ezifana nesifo seswekile kunye nesifo senhliziyo. Ngokophononongo olwenziwe ngoMeyi ka-2018, malunga ne-54% yabemi (uninzi lwabo lulutsha) bakholelwa ukuba akukho mntu ubukhathaleleyo ubukho babo. Ubulolo kunye nokudandatheka kunokulungiswa ngezinto ezininzi ezenzeka kubomi bemihla ngemihla, kwaye ngenxa yemiphumo emibi yokuphila ubomi obubodwa, akukho nto ingcono kunokuba unodoli wesini ukubonelela ngesisombululo sexesha elide. akunjalo?Oonodoli bokwabelana ngesondo bakubonelela ngeqabane lokwabelana ngezona zihlandlo zisezantsi ebomini bakho xa kungekho mntu uqaphelayo. Ngokuqhelekileyo, isithukuthezi siya kukugcina kude nesihlwele, kwaye unodoli wesondo wobomi obujikelezileyo unokukwenza uzive uthandwa kwaye unyamezele. Ngokungafaniyo nabahlobo bakho, unodoli wesondo uya kuphulaphula, akaze akugwebe, kwaye okona kubaluleke kakhulu, uya kuhlala ekunika indawo ekhuselekileyo yokuzithemba entliziyweni yakho.
❤ Oonodoli bethu bokwenene benziwe nge-TPE yezonyango ekhuselekileyo nengatyhefu, ephantse ithambe njengabantu bokwenyani.
❤ Unokubekwa naphina njengomfazi wokwenyani. Unodoli ngamnye wokwabelana ngesondo okwenyani unamathambo esinyithi achazwe ngokupheleleyo. Ngaba unokukuzisela ulonwabo lokugqibela ngokwesondo.
❤ Zonke iimveliso zoonodoli besini zithunyelwa ngaphandle kwentlawulo. Akukho mali ifihliweyo.
❤ Ibhokisi ekhethekileyo yokugcina kunye nokuhambisa oonodoli besini. Abanye abanakuyibona njengonodoli evela ngaphandle-ukhusela imfihlo yakho.
Ukuhlamba umzimba wakho ngesondo
Umzimba woonopopi bakho ngokwesondo kufuneka ucoceke rhoqo kwiintsuku ezingama-30 ngokuhlamba okanye ngeeshawari usebenzisa isepha ethomalalisayo.
Kulungile ukuhlala unodoli wakho emanzini okanye eshaweni kunye naye, kodwa ungavumeli ukuba intloko okanye intamo yakhe ityibilike phantsi kwamanzi.
Ukuhlamba ubuso boonodoli bakho besini, sula ngobunono ngelaphu elimanzi kunye nesepha ye-antibacterial. * Kwakhona, sukuntywilisela intloko oonodoli bakho emanzini.
❤ Sebenzisa itawuli ethambileyo yokuthambisa kwaye ubambe ngobunono unodoli wakho wesini owomileyo emva kokucoca.
❤ Emva kokuma kakuhle, thambisa uthuli olukhanyayo lwe powder yokuvuselela kunye nebrashi ebandakanyiweyo ukugcina ulusu luthambile kwaye luluhle.
Ungaze usebenzise isomisi seenwele okanye omnye umthombo wobushushu ukuvuthela unodoli owomileyo.
Ukucoca iinwele zakho zoonodoli, susa iwigi entlokweni yakhe kwaye ucoce iwigi ngeshampu efanelekileyo kunye nesilungisi. Vumela i-wig yome ngokwemvelo (usebenzisa i-wig stand xa kunokwenzeka) uze udibanise ngobumnene i-wig ukuqala ukusuka ezantsi uze unyuke phezulu.
Sicebisa ukuba kusetyenziswe ikhondomu nonodoli wakho ukunqanda ukukhula kweentsholongwane.
Isini sangasese, ubundlobongela besini kunye nokucocwa kwejelo lomlomo
I-Doll's vagina, i-anus kunye nommandla womlomo womlomo kufuneka uhlambuluke emva kokusetyenziswa kokukhula kwebhaktheriya, kuba i-TPE isikhumba sinokugqithisa kune-silicon. Hlamba umjelo ngamanzi anesepha ye-antibacterial soapy kwimpompo encinci yokunkcenkceshela de icocwe kakuhle, emva koko uhlambe umsele ngamanzi acocekileyo kumatshini wokunkcenkceshela kwilungu lobufazi de isuswe yonke isepha. Yomisa umsele kakuhle. Sula uthuli ngomgubo owomileyo ngaphakathi nangaphandle.
Ukunyamekelwa kolusu kunye neempahla
Ukucoca Ukuba ulusu luyanamathela, emva kokucoca kunye nokomisa, ngobunono khanyisa unodoli ngonodoli okanye ngomgubo wosana kwaye wome ukuze ulusu luthambe kwaye luthambe. Oku kubaluleke kakhulu ukuthintela ukukrazulwa koonodoli besini. Nceda unakekele ukuqinisekisa ukuba naziphi na iimpahla ezinxitywe onodoli azizukutshintsha umbala. I-TPE inyanyeke kakhulu, kwaye imibala emnyama okanye emnyama ingopha kwaye ibangele ukutshintsha kombala wedoli, ekunzima nokuba kungenzeki ukuyisusa. Lumka ungabeki oonodoli besini phezu okanye kwizinto eziqukethe i-inki, ezinje ngamaphephandaba, iimagazini, izinto ezimnyama okanye izinto zesikhumba eziqulathe i-pigment enyibilikayo ioyile. Sukuveza oonodoli besini ngokuthe ngqo elangeni ukukhusela ukuguga kwezinto ze-TPE.
Xa u-odola kwi-urdolls.com, uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa. Nje ukuba iodolo yakho ithunyelwe, uya kuthunyelwa nge-imeyile ulwazi lokulandela umkhondo wokuhanjiswa kweodolo yakho. Unokukhetha indlela oyithandayo yokuthumela kwiphepha loLwazi lwe-odolo ngexesha lenkqubo yokuphuma.
Ixesha elipheleleyo elithathayo ukufumana iodolo yakho iboniswe ngezantsi:
Ixesha lokuhambisa lilonke libalwa ukusuka ngexesha loku-odolwa kwakho ukuya kuthi ga kwixesha lokuhanjiswa kwalo. Ixesha lokuhambisa lilonke lidilikile lasebenza ngexesha lokuhambisa kunye nexesha lokuhambisa.
Ixesha lokuqhubekeka: Ixesha elithathwayo ukulungiselela into yakho (i) ukuthumela ngomkhombe kwindawo yethu yokugcina izinto. Oku kubandakanya ukulungiselela izinto zakho, ukwenza ukukhangela okusemgangathweni, kunye nokupakisha ukuthunyelwa.
Ixesha lokuhambisa: Ixesha lento yakho (okanye) yokurhuqela kwindawo yokugcina izinto ukuya kwindawo oya kuyo.
I-Urdolls ibonelela ngezi ndlela zilandelayo zokuhambisa kwamanye amazwe:
Iimveliso zothutho ngabathumeli abaziwayo abathembekileyo kwihlabathi (DHL / UPS).
Skrolela ezantsi Fumana zonke iiKhathalogu
Iibhokisi Zokugcina Iidoli
Iidola zexesha elizayo
Ngenyanga edlulileyo, intengo yesabelo se-DL
Elsa Babe Unodoli
Oonodoli bethu bezesondo baye benziwa uhlolo olucokisekileyo kunye nokuhlolwa komgangatho, ke uyazi ukuba nguwe kuphela okhangela oonodoli besini abakumgangatho ophezulu emhlabeni, nokuba ufuna ntoni, sinokuhlangabezana neemfuno zakho.
Siza kujonga i-odolo nganye kwaye siqwalasele ngononophelo yonke into ngobuqu bakho nge-imeyile, ke ukuba sicinga ukuba kukho impazamo, siza kujonga kwaye uya kuba nethuba lesibini lokuhlaziya okanye lokutshintsha ingqondo. Ukuba awuqinisekanga malunga nantoni na, vele ubuze, sihlala sonwabile ukukunceda. Sinokubonelela ngoncedo lwethoni yolusu, sikubonise iifoto zasefektri, okanye sikubonelele ngesikhokelo sokukunceda ukhethe olona hlobo lothando luthandekayo kuwe.
Sibonelela ngokuhambisa simahla kwihlabathi liphela kubo bonke oonodoli besini.
Isiko + iirhafu:
Zonke iirhafu kunye neefizi zesiko zibandakanyiwe kwixabiso kwaye ziya kujongwa sithi. (Abathengi abafumana iimpahla eCanada naseSwitzerland kufuneka bagqibezele imvume yabo ngokwesiko.)
Kuzo zonke iidoli zesondo, akukho ntlawulo ifihliweyo kwaye akukho ntlawulo yongezelelweyo.
Onke amazwe / imimandla apho oonodoli abasemthethweni basemthethweni banokuthunyelwa simahla.
Zonke iidoli zethu zesini zikwi-100% yokupakisha.
Unodoli wesini ugcinwe kwibhokisi emdaka ngombala engenalo uphawu.
Ikhuriya okanye umphathi akazi ukuba yintoni ebhokisini.
Amava e-Urdolls sex doll:
1. khetha unodoli wakho owuthandayo kwiseti yethu yoonopopi bezesondo eziphezulu.
2. Yenza unodoli wakho ngokwezifiso. Izinketho zoonodoli ngokwesondo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane.
3. Odola isingqino. Emva kokuthenga, uyakufumana isiqinisekiso se-odolo kwangoko, kwaye siya kuqhagamshelana nawe kwiiyure ezingama-24 ukuqinisekisa ukuba zonke iinkcukacha zichanekile kwaye uqinisekisa ukuba eminye imibuzo iyaphendulwa. (Ukuba awuyifumenanga i-imeyile yokuqinisekisa, nceda ujonge ugaxekile. Ukuba unemibuzo, nceda unxibelelane.)
4. Ubuqhetseba. Zisa unodoli wakho wesini ebomini. Umculi wethu we studio waqala inkqubo yokwenza oonodoli ngesandla.
5. Iifoto zocweyo: Emva kokulungiselela oonodoli, uya kufumana iifoto zomzi-mveliso ukuze uqinisekise konke ukubonakala. Mhlawumbi unodoli wakho ufuna uhlengahlengiso oluncinci, iiwigi ezahlukeneyo, amehlo ahlukeneyo, akukho ngxaki kwaphela.
6. Ukuhambisa nokuthumela. Emva kokufumana kunye nokuqinisekisa ukuba iifoto zomzi-mveliso wedoli zigqibelele, unodoli unokuthunyelwa ngaphandle kwaye uthunyelwe ekhayeni lakho elitsha-kwikhaya lakho! Sihlawula zonke iindleko zokuthumela ngenqanawe kunye neefizi zokucoca amasiko kubathengi kuwo onke amazwe.
7. Inamba yokutrekha: Uya kufumana inombolo yokulandela umkhondo kwaye ube nakho ukucwangcisa umhla othile wokuqokelela / ukuhambisa ngqo kunye nenkampani yethu yekhuriya. I-Fedex + UPS.
8. Ukuhanjiswa: Unodoli wakho ufikile. Konwabele, siyazi ukuba ngekhe sive kuwe kwiintsuku ezimbalwa kuba uyakuba uxakekile, kodwa ukuba uyasidinga, nceda unxibelelane nathi.
(Ukusuka ekuthengeni nasekufumaneni unodoli wesini, ixesha eliqhelekileyo limalunga neeveki ezi-3-4, kuxhomekeka kwindawo okuyo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda usishiyele umyalezo okanye unxibelelane nathi kwincoko ephilayo kwaye siya kukunceda.
Melody 163CM/5ft4 E-Cup SE Amehlo amakhulu TPE unodoli wesondo
Imbali yemvelaphi ye-Melody: I-Melody ngunodoli wesini we-TPE kunye nobude be-163cm / 5ft4. Yiyo loo nto oonodoli bezesondo beba lolona khetho lungcono lwezesondo ngaphandle kweengozi zempilo. Kanye njengokuba usiya kwindawo yokuthengisa ngesondo, ungaya kwindawo yokuthengisa ngoonodoli kwaye ulale nonodoli wesondo. Ungathenga kwakhona i-ch ...
Clara 163CM/5ft4 E-Cup SE Amabele amahle TPE unodoli wesondo
Imbali yemvelaphi kaClara: UClara unodoli wesondo we-TPE nobude be-163cm / 5ft4. Khawufane ucinge ubuyela kumfazi ohlala encumile, uhlala ekhazimla kwaye ekulungele ukukukholisa. Wayekulinde ngolangazelelo ukuba ubuye ekhaya, enekhethini evulekileyo kuphela-akazange abe nomsindo, ngentliziyo yakhe yonke. guys? Pha ...
Natalia 161 CM/5ft3 F-Cup SE Amabele amahle TPE unodoli wesondo
Ibali lemvelaphi yaseNatalia: UNatalia unodoli wesondo we-TPE nobude be-161 cm / 5ft3. Oku kunokubonakala kuchasene nawe, kodwa inyaniso kukuba emva kokusebenzisa unodoli wesondo, iqabane lakho linokufumana ubudlelwane obusondeleyo kunanini ngaphambili. Emva kweminyaka embalwa kubudlelwane, ngokuqinisekileyo uya kufumana ...
Adeline 161 CM / 5ft3 F-Cup SE Enomtsalane TPE Isondo unodoli
Imbali yemvelaphi ka-Adeline: U-Adeline unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-161 cm / 5ft3. Unodoli obhinqileyo omhle waseAsia udityaniswe nonodoli obhinqileyo obhinqileyo omhle. Abantu bayaphumelela kwintelekelelo, umnqweno, kunye neyantlukwano, yiyo loo nto ukuba noonodoli abaninzi besini kunokukunceda ufumane ukwaneliseka okupheleleyo ...
Jade 161CM / 5ft3 F-Cup SE Nature Skin TPE Sex Doll
Imbali yeJade yangasemva: IJade ngunodoli wesini weTPE nobude be-161cm/5ft3. Ewe, xa ubamba ibele lomfazi wokwenene, unaloo mvakalelo ithambileyo. Amabele kanodoli wakho wesondo aya kuthamba kakhulu kwaye uya kukwenza umthande. I-ergonomically eyenzelwe i-sex ye-vagina ye-sex iya kubamba ngobunono ...
Arya 165CM F-Cup SE Enchanting TPE Sex Doll
Ibali lemvelaphi ye-Arya: I-Arya iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-165cm. Ngokungafaniyo namashumi ambalwa eminyaka edlulileyo, kukho inqwaba yoonodoli bezesondo kwimarike ngoku, kwaye uyilo lwabo lwahlukile ukuhlangabezana neemfuno ezihlala zitshintsha zentengiso. Zineemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu onokuthi ukhethe kubo, okukuvumela ukuba ...
Eliza 168CM F-Cup SE Amabele amahle TPE Idoli yesini
Ibali lika-Eliza langemva: U-Eliza unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-168cm. Okokugqibela, ukwazi ukusebenzisa oonodoli besondo kuya kukunika amandla okufumana olona lonwabo luphezulu kunodoli wesondo. Ewe, ukulala ngesondo nonodoli wesondo kuya kuziva ngathi ulala nomfazi wokwenene. Ngoko, kutheni ungazami? Uya kuba ne...
Lyla 163CM/5ft4 E-Cup SE Amehlo amakhulu TPE Idoli yesini
Ibali lemvelaphi yaseLyla: ULyla unodoli wesondo we-TPE nobude be-163cm / 5ft4. Njengokulala nokutya okufanelekileyo, iintlobano zesini zigqalwa njengenye yeminqweno yabantu yamandulo. Nangona kunjalo, ukuba neentlobano zesini nomnye woonodoli bethu abafana nobomi kulungile kwimpilo yakho ngenxa yesizathu esingaphezulu kwesinye: kunjalo. Ukwabelana ngesondo kune ...
Isabelle 151CM E-Cup SE Enchanting TPE Sex Doll
Ibali elingemva lika-Isabelle: U-Isabelle unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-151cm. Kutheni besanda abantu abazimisele ukuba noonodoli besini? Nangona isondo siseyi-taboo kwiinkcubeko ezininzi, oku akuzange kuthintele abantu ekuthengeni okanye ekufumaneni iidoli zesondo eziye zanda kwimfuno kwiminyaka. Enye into ehambelanayo ...
Remi 163CM E-Cup SE Eyelashes Long TPE Sex Doll
Ibali lemvelaphi ye-Remi: I-Remi iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-163cm. Ukuphepha ungcoliseko, oonodoli besondo kufuneka bacocwe ngokufanelekileyo nangokucokisekileyo. Ibhaktheriya kunye nefungi zingahlala ngaphakathi kwidoli, ngakumbi emva kokuphuma, ngoko yonke idoli kufuneka ihlambuluke ngokufanelekileyo emva kokusetyenziswa ngalunye. Emva kokusetyenziswa, susa ...
AbaThengi abathenga leDoll yoSondo bayathenga
I-Setlla-148CM ethandekayo iititi ezintsundu i-brown Skin TPE sex Doll
Ukuzibophelela kwethu: ❤ Zonke iimveliso zoonopopi zesini zithunyelwa simahla. Akukho mali ifihliweyo. ❤ Ibhokisi ekhethekileyo yokugcina kunye nokuhambisa oonodoli besini. Abanye abanakuyibona njengonodoli evela ngaphandle-ukhusela imfihlo yakho. ❤ Oonodoli bethu bokwenene benziwe ngokukhuselekileyo nangabayiyo i-tox ...
UMonica-Ukudlala kwabaDala abantu abaDala 2 Isipho seHole ngaphandle kwama-Skeleton Anime ngesondo ...
❤ Ubude 59cm ❤ Ububanzi 54cm ❤ Ubude 38cm ❤ Ubunzima 18.8kg ❤ lobufazi 14cm ❤ I-Anal 10cm ❤ Ngetonela ye-3D yangaphakathi yokuthungwa kunye nemathiriyeli eyomeleleyo, inokuvelisa ithraphu eyomeleleyo nekhululekileyo, ukuziva njengomfazi wokwenyani. ❤ Yenziwe ngezinto ze-TPE, ukuthungwa kuthambile, bhetyebhetye, sk ...
UGaskell-158CM B-indebe eChophileyo enemibala yoKolo kwi-TPE yesondo
UMichelson-160CM B-indebe yaseJapan isitayile esimhlophe soLusu lwe-TPE
I-Agatha-150CM ye-D-indebe yaseYurophu yoLusu lweTayitile enombala we-TPE ...
UJoanne-waseJapan we-165CM ii-Boobs ezinkulu ze-WM NO.314 yeNtloko yoLusu lwe-TPE ...
I-Cai Bin-i-160cm yase-Korea i-Anchor yase-Japan yoMzimba oPhila we-TPE weSondo
❤ Ngokusekwe kumzimba ophilayo we-anchor yaseKorea uCai Bin. ❤ Yenziwe ngezinto ezibonakalayo ezinenyani ze-TPE, ukuziva okufanelekileyo. Ikhuselekile kwaye ihlala ixesha elide. ❤ Inkangeleko yeengelosi, ubuhle kunye nobuso obuhle buhle kakhulu. ❤ Izinto ezikhuselekileyo: 100% ikhuselekile, n kwi-ityhefu kwaye ayinancasa. ❤ Ukupakisha kwangasese kunye ne-100% eyingqondi: ...